Hamro Kantipur | एमाले महासचिवमा विष्णु कि शंकर ? नेताहरू रणनीतिमा जुटे एमाले महासचिवमा विष्णु कि शंकर ? नेताहरू रणनीतिमा जुटे
एमाले महासचिवमा विष्णु कि शंकर ? नेताहरू रणनीतिमा जुटे
काठमाडौं, मंसिर ८ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)को १०औं महाधिवेशन दुई दिन मात्र बाँकी छ । यतिबेला पार्टीको प्रभावशाली पद हत्याउन नेताहरू आन्तरिक रणनीतिमा जुटेका छन् ।
उता, अध्यक्षपछिको प्रभावशाली पद महासचिव को बन्छ? भन्ने कार्यकर्तामा कौतुहलता बढेको छ । १०औं महाधिवेशनमा महासचिव बन्ने दौडमा विष्णु पौडेल, शंकर पोखरेल, घनश्याम भुसाल, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, सुरेन्द्र पाण्डेलगायत चर्चामा छन् ।
ओलीनिकट पौडेल र पोखरेल दुवै लुम्बिनी प्रदेशका नेता हुन् । लुम्बिनी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री पोखरेललाई ओलीको मात्रै नभई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको समेत समर्थन रहेको छ । जबजको व्याख्याता पोखरेललाई भण्डारीले भित्रभित्रै सहयोग गरिरहेको स्रोतको दाबी रहेको आजको राजधानी दैनिकमा खवर छ ।